Macluumaadka Visa-UK - Dugsiga Dhexe, Cambridge
Waxay kuxirantahay dhalashadaada iyo mudada aad rabto inaad timaado UK, waxaad ubaahantahay inaad dalbato fiiso. Joogitaanka illaa 6 bilood waa Visa Canshuur Booqasho, iyo joogitaan 6-11 bilood ah, Fiiso Dalbasho Muddo Gaaban ah. Fadlan tan ka hubi websaydhka Dawladda UK www.gov.uk/apply-uk-visa halkaas oo aad ka ogaan karto inaad fiiso u baahan tahay, sidoo kalena waxaad ka dalban kartaa khadka tooska ah. Waxaan baarnay boggan, inkasta oo aanan uqalmin bixinta talobixinta sharciga, waxaan fahamsanahay in haddii aad jeceshahay inaad dalbato fiiso ay tahay inaad haysato dukumiintiyada saxda ah oo ay kujiraan:
Warqada Oggolaanshaha oo caddaynaya in laguu aqbalay kooras oo aad bixisay khidmaddaada. Warqadda ayaa sidoo kale siin doonta macluumaad ku saabsan koorsada.
Caddayn muujinaysa inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku bixiso joogitaankaaga Boqortooyada Midowday (UK).
Haddii aadan ku guuleysan helitaanka fiiso fadlan noo soo dir nuqul ka mid ah foomka diidmada fiisaha oo waxaan kuu diyaarin doonaa soo celinta khidmadaha la bixiyay. Waxaan soo celin doonnaa dhammaan khidmadaha aan ka ahayn koorsada hal toddobaad iyo khidmooyinka hoyga si loo daboolo kharashyada maamulka.
2017 Dugsiga Dhexe ee Luqadda, Cambridge